Serivisy ho an'ny mpanjifa | Shandong Dingtaisheng Machinary Technology Co., Ltd.
Fandrafetana tranonkala sy famolavolana programa
Araka ny fangatahan'ny mpanjifa, omeo vahaolana ara-teknika kendrena, mahomby, fitaovana fanamafisana ny fitaovana fanamafisam-peo ho an'ny drafitra antsipiriany.
Fikojakojana sy fanamboarana
DTS dia manana ekipa aorian'ny fivarotana azy manokana, afaka manome serivisy fikojakojana tsy tapaka ho an'ny mpanjifa izahay. Rehefa manana olana ny fitaovanao, ny injeniera aorian'ny varotra DTS dia afaka mamantatra sy mitarika anao hamaha ireo olana lavitra. Rehefa tsy azon'ny mpanjifa soloina irery ny kojakoja dia nampanantena ny DTS fa ho tonga ao amin'ny gara izy ao anatin'ny 24 ora ao amin'ny faritaninay sy ao anatin'ny 48 ora ivelan'ny faritany.
Manana laboratoara fitiliana i DTS. Ireo fotodrafitrasa ireo dia manana fitaovana feno hamerina ny tena toetran'ny famokarana indostrialy.
Ianao dia hahazo fanampiana avy amin'ny manam-pahaizana momba ny fanamorana sy ny teknolojia sakafo ary afaka:
- Fitsapana sy fampitahana ny fizotran'ny fizotrany sy ny fampiharana (rafitra miovaova, mihodina, mihetsiketsika)
- Andramo ny rafitray mifehy
- Mametraha fomba fanao sterilization (test retort) miaraka amin'ny fitaovana F0 calculation
- Fitsapana ny fonosanao amin'ny fizotranay
- Tombano ny kalitaon'ny sakafo vita vita
Miaraka amin'ny fanampian'ny mpiara-miasa dia ampiasaina ihany koa ireo sampana fanandramana amin'ny fampivoarana ny fitaovana indostrialy, toy ny orinasa famenoana, famehezana ary famonosana.
Fitsapana vokatra, fampivoarana ny rafi-teknika
Mila mamolavola ny fomba fahandro fanodinana hafanana ve ianao?
- Lasa tompona mirehareha amin'ny DTS Retorts ve ianao?
- Te hampitaha ny fitsaboana isan-karazany ve ianao ary manatsara ny fomba fahandro anao?
- Mampivelatra andian-tsarimihetsika vaovao ve ianao?
- Te-hanova fonosana vaovao ve ianao?
- Te handrefy ny sanda F ve ianao? Sa misy antony hafa?
Ny mpiasao rehetra dia afaka mahazo tombony amin'ny fampiofanana mifanaraka amin'ny sehatra samihafa
Fampiasana ny valin-kafatra miasa, mety ho an'ny vao manomboka, efa za-draharaha na mpiasa iray hafa
Ny serivisinay dia azo tanterahina any amin'ny toerana misy anao na amin'ny fanandramana LABS, izay natao mba handraisana ireo mpianatra ary hahafahan'izy ireo mampifangaro ny fahalalana teôria amin'ny traikefa azo tsapain-tanana. Ireo manampahaizana manokana momba ny fitsaboana hafanana dia hanampy sy hitarika anao mandritra ny fiofanana. Hanampy anao koa izahay hamindra valim-panadinana amin'ny tranokala famokarana indostrialy. Tsy misy fivoaran'ny fampandrosoana manakana ny fitaovanao indostrialy, mamela anao hitahiry fotoana, hampitombo ny fahafaha-manao ary hanohy ny famokarana mandritra ny fiofanana.
Raha tsy izany dia afaka manao ny fitsapana rehetra ao amin'ny laboratoara izahay ary manaraka ny toro-hevitrao. Mila mandefa santionany amin'ny vokatrao fotsiny izahay dia hanome anao tatitra iray manontolo amin'ny faran'ny fitsapana. tsiambaratelo tanteraka.
Fiofanana amin'ny zavamaniry anay
Manome fiofanana amin'ny zavamaniry izahay (fikojakojana mahazatra, fikolokoloana mekanika,
rafitra fanaraha-maso sy fiarovana ...), politika fampiofanana natao mifanaraka amin'ny zavatra ilainao manokana.
Ao amin'ny laboratoara anay dia afaka manome fotoam-pampiofanana ho an'ireo mpanafika ianao.
Azon'izy ireo atao avy hatrany ny mampihatra ny teôria mandritra ny fivoriana.
Fiofanana ao amin'ny tranokalan'ny mpanjifa
Fantatray ny ozinina fanodinana ary fantatray fa rehefa mihena ny fitaovana dia mandany vola be ianao. Vokatr'izany, ny DTS dia nampihatra famolavolana sy singa hentitra amin'ireo masininay rehetra. Na ny laboratoara sy ny masinina ataontsika aza dia amboarina miaraka amina singa ambaratonga indostrialy. Miaraka amin'ny fonosana fanaraha-maso efa mandroso, ny ankamaroan'ny fikaroham-bahaolana amin'ny fitaovana dia azo atao amin'ny alàlan'ny modem. Na izany aza, rehefa mila fanampiana eo amin'ny zavamaniry ianao, na dia ny rafitra mpanohana lavitra indrindra aza dia tsy mahasolo ny fananana teknisiana DTS na injeniera eo an-toerana. Ny mpiasa dia afaka manampy anao hamerina ny milina.
● Fitsinjarana ny mari-pana sy ny fidirana amin'ny hafanana
Ao amin'ny DTS, zava-dehibe ny fanampiana ireo mpanjifa hisafidy ny valiny mety ary hiara-hiasa amin'izy ireo hanatsara ny fampiasana, ny fiasa ary ny fikojakojana ireo fitaovana. mpanolotsaina manara-maso mba hiantohana fa miasa sy miasa amin'ny fomba azo antoka sy mahomby ary mahomby indrindra ny valin-kafatra ataonay.
Raha te haondrana any Etazonia ny vokatrao, na raha hapetraka aloha ny fitaovanao, na raha misy fanamboarana lehibe ataonao dia mila manao fizarana mari-pana sy fitsapana fidirana amin'ny hafanana ianao.
Izahay dia manana ny fitaovana ilaina rehetra amin'ny fitsapana toy izany. Nividy fitaovana fandrefesana manokana izahay (ao anatin'izany ny logger data) sy rindrambaiko fandalinana data mba hanatanterahana ny fitsapana araka ny tokony ho izy arak'izay takiana aminao sy hanomezana anao tatitra feno momba ny fitsapana.
Hatramin'ny nanombohany, ny DTS dia nanompo ny indostrian'ny fanodinana sakafo, nanome serivisy ho an'ireo mpanodina sakafo ambany asidra (LACF) sy zava-pisotro mba hanampiana azy ireo hametraka ny fizotran'ny fomba famokarana sakafo azo antoka sy azo antoka. vahaolana sy serivisy fanodinana hafanana ho an'ny mpanjifa manodina retort misy sy vaovao manerantany.
● fankatoavan'ny FDA
Fandefasana rakitra ao amin'ny FDA
Ny fahaizanay sy ny fiaraha-miasanay amin'ireo mpiara-miasa iraisam-pirenena manampahaizana manokana amin'ny fanaterana serivisy FDA dia ahafahantsika mifehy tanteraka ity karazana iraka ity. Hatramin'ny nanombohany, ny DTS dia nanompo ny indostrian'ny fanodinana sakafo, nanome serivisy ho an'ireo mpanodina sakafo ambany asidra (LACF) sy zava-pisotro mba hanampiana azy ireo hametraka ny fizotran'ny fomba famokarana sakafo azo antoka sy azo antoka. vahaolana sy serivisy fanodinana hafanana ho an'ny mpanjifa manodina retort misy sy vaovao manerantany.
Fanombanana ny fanjifana angovo
Androany, fanamby amin'ny ambaratonga tsirairay ny fihinanana angovo. Tsy azo ihodivirana ny fanombanana ny angovo ankehitriny. Ho an'ny fahombiazan'ny asa tsara indrindra, ny tombana dia tokony hatao amin'ny dingana voalohany amin'ny tetikasa.
Fa maninona no mila fanombanana angovo ianao?
- Famaritana ny angovo takiana,
- Farito ny vahaolana ara-teknika mety (fanatsarana ny habakabaka, ny lafiny teknika, ny diplaoman'ny automatisation, ny torohevitra omen'ny manam-pahaizana ...).
Ny tanjona faratampony dia ny manatsara sy mampihena ny fanjifana angovo manerana ny fotodrafitrasa, indrindra ny rano sy ny etona, izay fanambin'ny faharetana lehibe tamin'ny taonjato faha-21.
DTS dia nanangona fahaiza-manao matanjaka amin'ny fampihenana ny vidin'ny angovo. Ny vahaolana ataonay dia manampy ny mpanjifanay hampihena be ny fanjifana rano sy etona.
Raha ny fanombanana, ny haben'ny tetikasa retort, ampiarahana amin'ny tena toetoetran'ny fiasan'ny mpanjifa, afaka manome vahaolana sarotra na tsotra ho an'ny mpanjifa izahay.
Antsoy izahay +86 536-6549353